दशैंमा मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दा कता फर्कने ?
विजयादशमीको मुख्य दिन आज, मान्यजनबाट टीका ग्रहण गरिदै
विराटनगर, १२ असोज । समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएको विराटनगरभित्र कक्षा ११ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन् । महामारी तीव्र गतिमा फैलिएको विराटनगरमा एक्कासी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र कक्षा ११ को परीक्षा असोज २५ गतेबाट ३ कात्तिकसम्म सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । कोरोना महामारीका कारण खानलाउनै समस्या भएका अभिभावकबाट दसैंको मुखमा जवरजस्ती पैसा असुल्न परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
‘दसैंको मुखमा महानगरले परीक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको रहेछ,’ विद्यार्थी संरक्षण देवकोटाले भने, ‘फिस तिर्नुहोस् भनेर दबाब दिँदा तनाब हुन्छ, एक हजारभन्दा बढीको भिडमा बस्दा घर–घरमा कोरोना पुग्ने जोखिम हुन्छ ।’
विद्यार्थीले महामारीपछि परीक्षा लिन आग्रह गरेका छन् । उनले महामारीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भए अनलाइन पद्दतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका व्यक्तिले फिस तिर्न नसकेर भोलि आत्महत्या गरे भने जिम्मेवारी कसले लिने ?’ देवकोटाले भने, ‘विद्यार्थी र परिवारमाथि तनाब थप्ने काम भयो ।’
अहिलेकै अवस्थामा परीक्षा भए कोरोनाको जोखिम बढ्ने कान्तिपुर कलेजका विद्यार्थी शशंक पाठक बताउँछन् । ‘दस दिनअघि परीक्षा दिने भनेर सूचना निकालियो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला परीक्षा भयो भने कोरोना लाग्दैन ? बुबाआमाको समस्या पनि बुझिदिनु पर्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले माघ महिनासम्म कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोनाको संक्रमण कम नभएकाले विद्यालय सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
विराटनगरबाहेक अन्य स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना निकालेका छैनन् । तर महानगरभित्र दसैंको मुखमा अभिभावबाट शुल्क उठाउनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यहीअनुसार महानगरभित्रका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालनको तयारी भएको हो । कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुले महानगरपालिकालाई समन्वय गरिदिन आग्रह गरेपछि महानगरले समन्वय मात्र गरेको महानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख दुर्गा खतिवडाले बताए । विद्यालयलले स्वास्थ्य सतर्कतासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताएपछि महानगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिएको बताए ।
हिसान मोरङका अध्यक्ष राजेश कार्की सबै सतर्कता अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँछन् । शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएकाले अभिभावबाट शुल्क संकलन गरिने उनले बताए । ‘समस्या परेको अवस्थामा हामी पनि बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘अभिभावक र विद्यार्थीको सहजताकै लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।’ विराटनगरमा प्रदेश १ र प्रदेश २ का करिब ८ हजार विद्यार्थी कक्षा ११ मा पढ्छन् ।